Muxuu Erdogan ka yiri Guulaha Shirka Soomaalida ee London – idalenews.com
Muxuu Erdogan ka yiri Guulaha Shirka Soomaalida ee London
Iyadoo uu Ra’isul wasaaraha Dalka Turkiga, Rajab Dayib Erdogan, ka cudur daartay ka qeybgalka Shirka Magaallada London maalintii shalay uga furmay Somalia, ayaa waxa uu haddana si diiran usoo dhaweeyay habsamida uu shirkaasi u dhacay.
Qoraal ka soo baxay Xafiiska Ra’isul wasaaraha Dalka Turkiga, Rajab Dayib Erdogan oo ay daabaceen Warbaahinta Turkiga ayaa waxaa lagu sheegay in Erdogan uu si diiran usoo dhaweeyay Natiijada ka soo baxday Shirkaasi.
‘’Dowladda Turkiga horay wey u taageersaneed Dowladad Somalia, xiligaana wey xoojineysaa taageerida ay u heyso Turkiga Somalia, qaabka uu shirka u dhacay Caalamka isha ayee ku hayeen Dowladda Turkigana si wanaagsan ayee u soo dhabeyneysaa qeybna wey ka qaadaneysaa maalgalinta,dhismaha Ciiddamadda, Ammaanka iyo dhaqaalaha’’ sidaa waxaa yiri Erdogan, oo intaa ku daray in shacabka soomaaliyeed looga baahan yahay inay ka faa’iideystaan Fursadaha kaga imaanaya beesha caalamka.
Qoraalka ka soo baxay Xafiiska Erdogan, ayaa waxa uu sheegay in Dowladda iyo Shacabka Somaliyeed ay heystaan Fursado loona baahan yahay in Shacbiga Somalia ay garabsiiyaan Ciiddamadad Ammaanka si looga bad baado weerarada kaga imaanaya dhanka Alshabaab.
Si kastaba ha ahaatee, soo dhaweynta Natiijooyinka Shirka London ee Ra’isul wasaaraha Dalka Turkiga, Rajab Dayib Erdogan, ayaa waxa uu imaanaya Xilli Erdogan, uu ka cudur daartay Martigalin uu ka helay Dhigiisa Dalka Britain David Camiron, hayeeshee uu Erdogan ka cudur daartay ka qeybgalka Shirkaasi balse uu Wafdi u diray.